Dzimwe Nhengo dzeMDC Dzoramba Kutambira Mai Makone Sasachigaro weWomen's Assembly
Zvita 17, 2007
Danho rakatorwa nehutungamiri hwe MDC neSvondo, rekuti Mai Theresa Makone varambe vachitungamira Women’s Assembly, kusvikira sarudzo dzapera gore rinouya, yasimudzira zvakare makakatanwa ari mubato iri, panyaya iyi.
NeSvondo National Council yebato iri yakaita musangano ichizeya nyaya yenhaurirano dziri pakati pavo neZANU-PF, pamwe nenyaya yeWomen’s Assembly. Musangano uyu wakazobuda nechisungo chekuti Extra-Ordinary Congress yekusarudza hutungamiri hutsva hwe Women’s Assembly, ichaitwa mushure memwedzi mitatu sarudzo dzemuna Kurume dzapera.
Musangano uyu wakabudawo zvakare nechisungo chekuti Mai Matibenga vapihwe chigaro mu National Executive Committee. Asi Mai Matibenga vaudza Studio 7 kuti vachiri kumbozeya zvisungo izvi.
Ukuwo Mai Makone vaudzawo Studio 7 kuti havana chekutaura pamusoro pezviri kuitika izvi.
Asi mubati wehomwe mu MDC Midlands North Province, Va Aaron Chinhara, vaudza Carole Gombakomba weStudio 7 kuti iri idanho rakatorwa nehutungamiri hwebato chete, sezvo ruzhinji rwakange ruchipokana nemaitirwo akaitwa sarudzo dzekuti Mai Makone vave mutungamiri we Women’s Assembly.
Dzimwe Nhau Lubva ku Studio 7...